သူ့ရဲ့အားနည်းချက် တစ်ခုဖြစ်တဲ့ မေးစေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကဲ့ရဲ့နေတဲ့ပရိတ်သတ်တစ်ဦအား သတိပေးစကားဆိုလိုက်တဲ့ ခင်ရူပ – Nyi Ma Lay
သူ့ရဲ့အားနည်းချက် တစ်ခုဖြစ်တဲ့ မေးစေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကဲ့ရဲ့နေတဲ့ပရိတ်သတ်တစ်ဦအား သတိပေးစကားဆိုလိုက်တဲ့ ခင်ရူပ
By Ko AyePosted on June 22, 2022 June 22, 2022
ပရိသတ် ကြီးရေ ခင်ရူပကတော့ အလှမယ် အဖြစ် ပရိသတ်တွေ စတင် သိရှိ ခဲ့ပြီး အခုနောက်ပိုင်းမှာ အနုပညာ အလုပ်တွေ ကြဲသွားပေမယ့် လည်း သူမ အနေနဲ့ Live လွှင့်ကာ ဈေးရောင်း နေတဲ့ အနုပညာရှင် တစ်လက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အနုပညာ အလုပ်တွေကို အခုချိန်မှာ ရပ်နား ထားတဲ့ ခင်ရူပ ကတော့ အိမ်ထောင်သည် ဘဝနဲ့ အေးချမ်းစွာ နေထိုင် နေသူပါ။
လက်ရှိ မှာလည်း ” နောက်က အီမိုဂျီ ကြောင့်လည်း ကိုယ့်ကို ချစ်တယ်လို့ကို မမြင်မိတာပါ..လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဖြစ်တည်မှုကို shaming လုပ်တယ် လို့ဘဲ မြင်မိပါတယ်..လူ့ကျင့်ဝတ် နားမလည်ဘူးလို့ဘဲ မြင်မိတယ်။ ဒါမျိုးတွေ အကုန်နီးပါး ဘန်း ပါတယ် ရှင် ဘယ်သူမှ မပြည့်စုံတဲ့ ဘဝမှာ ကိုယ့်ဘဝ မပြည့်စုံမှု ထက် ပြောရရင် ကိုယ့်အိုးထပ် သူများအိုး စိတ်ဝင်စားနေ လို့လည်း ဘဝကြီးက မတိုးတက် လာနိုင် ပါဘူးနော်။ အားနေ ဒါဘဲ ပြောစရာရှိ နေကြတာ လားဟင်? မလိုက်ပေမယ့်လည်း ဘာတတ်နိုင် မှာလည်း?လှနေတယ် လည်း မပြောပါနဲ့ ရပါတယ်..လူတိုင်း မပြည့်စုံပါဘူး .. ဒါကျမအ ားနည်းချက်ပါ ဒါဘဲ လာလာထောက်ပြ နေစရာ မလိုပါဘူး..
တသက်လုံး ပြင်မှာ မဟုတ်တဲ့ မေးစေ့ပါရှင် သက်ဆုံးတိုင် ထိ ဒီမေးစေ့နဲ့ ရှင်သန်မှာပါ ရှင် မိဘပေးတဲ့ မေးစေ့ပါ ကိုယ့်မျက်နှာ ကိုယ့်ဘဝ ကိုယ်သာ စိတ်ဝင်စားကြပါ လူအချင်းချင်း ပိန်ပိန် ဝဝ လှလှမလှလှ shaming လုပ်ခွင့် မရှိပါ .. သင်တို့ တင်ကျွေးထားရတာ မဟုတ်ပါ”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့ သူမအား body shamingပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေကို သတိပေး စကားပြောကြား ခဲ့တာပါ။ ပရိသတ် တွေလည်း ခင်ရူပရဲ့ ခံယူချက်နဲ့ သူမ ရဲ့ခံယူချက်လေးကို သဘောကျရင် တခုခု မှတ်ချက် ပေးခဲ့ ကြပါဦးနော်။
ပရိသတ္ ႀကီးေရ ခင္႐ူပကေတာ့ အလွမယ္ အျဖစ္ ပရိသတ္ေတြ စတင္ သိရွိ ခဲ့ၿပီး အခုေနာက္ပိုင္းမွာ အႏုပညာ အလုပ္ေတြ ႀကဲသြားေပမယ့္ လည္း သူမ အေနနဲ႔ Live လႊင့္ကာ ေဈးေရာင္း ေနတဲ့ အႏုပညာရွင္ တစ္လက္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အႏုပညာ အလုပ္ေတြကို အခုခ်ိန္မွာ ရပ္နား ထားတဲ့ ခင္႐ူပ ကေတာ့ အိမ္ေထာင္သည္ ဘဝနဲ႔ ေအးခ်မ္းစြာ ေနထိုင္ ေနသူပါ။
လက္ရွိ မွာလည္း ” ေနာက္က အီမိုဂ်ီ ေၾကာင့္လည္း ကိုယ့္ကို ခ်စ္တယ္လို႔ကို မျမင္မိတာပါ..လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ျဖစ္တည္မႈကို shaming လုပ္တယ္ လို႔ဘဲ ျမင္မိပါတယ္..လူ႔က်င့္ဝတ္ နားမလည္ဘူးလို႔ဘဲ ျမင္မိတယ္။ ဒါမ်ိဳးေတြ အကုန္နီးပါး ဘန္း ပါတယ္ ရွင္ ဘယ္သူမွ မျပည့္စုံတဲ့ ဘဝမွာ ကိုယ့္ဘဝ မျပည့္စုံမႈ ထက္ ေျပာရရင္ ကိုယ့္အိုးထပ္ သူမ်ားအိုး စိတ္ဝင္စားေန လို႔လည္း ဘဝႀကီးက မတိုးတက္ လာႏိုင္ ပါဘူးေနာ္။ အားေန ဒါဘဲ ေျပာစရာရွိ ေနၾကတာ လားဟင္? မလိုက္ေပမယ့္လည္း ဘာတတ္ႏိုင္ မွာလည္း?လွေနတယ္ လည္း မေျပာပါနဲ႔ ရပါတယ္..လူတိုင္း မျပည့္စုံပါဘူး .. ဒါက်မအ ားနည္းခ်က္ပါ ဒါဘဲ လာလာေထာက္ျပ ေနစရာ မလိုပါဘူး..
တသက္လုံး ျပင္မွာ မဟုတ္တဲ့ ေမးေစ့ပါရွင္ သက္ဆုံးတိုင္ ထိ ဒီေမးေစ့နဲ႔ ရွင္သန္မွာပါ ရွင္ မိဘေပးတဲ့ ေမးေစ့ပါ ကိုယ့္မ်က္ႏွာ ကိုယ့္ဘဝ ကိုယ္သာ စိတ္ဝင္စားၾကပါ လူအခ်င္းခ်င္း ပိန္ပိန္ ဝဝ လွလွမလွလွ shaming လုပ္ခြင့္ မရွိပါ .. သင္တို႔ တင္ေကြၽးထားရတာ မဟုတ္ပါ”ဆိုတဲ့စာေလးနဲ႔ သူမအား body shamingျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့သူေတြကို သတိေပး စကားေျပာၾကား ခဲ့တာပါ။ ပရိသတ္ ေတြလည္း ခင္႐ူပရဲ႕ ခံယူခ်က္နဲ႔ သူမ ရဲ႕ခံယူခ်က္ေလးကို သေဘာက်ရင္ တခုခု မွတ္ခ်က္ ေပးခဲ့ ၾကပါဦးေနာ္။
Previous post ကင်ဆာရောဂါသည်ဖြစ်ပေမဲ့ ကလေးတစ်ဖက်နဲ့ဈေးရောင်းနေရရှာတဲ့ သရုပ်ဆောင်မနွယ််နီကိုကိုယ်ချင်းစာစိတ်အပြည့်နဲ့ကူညီပေးမယ့် နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်
Next post ချောင်းတွေဆိုးပြီး ရင်ကြပ်နေတာကြောင့် အသက်ရှူချောင်စေတဲ့ ဆေးတွေရှူနေရတဲ့ Liam လေး ရဲ့ဗီဒီယိုကို ပြသလာတဲ့ လွင်မိုး